लियो राशिफल Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
Tag: लियो राशिफल
पुरातन राशिको तपाईंको लियो रासी
लियो सिंहका लागि ल्याटिन शब्द हो। आजको कुंडलीको प्राचीन राशि अध्ययनमा, तपाईंले कुंडली मार्फत प्रेम, सौभाग्य, स्वास्थ्य, र तपाईंको व्यक्तित्वको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सिंह राशिफलको सल्लाह पालना गर्नुहुन्छ।
तर के प्राचीनहरूले सिंहलाई यसरी अध्ययन गरेका थिए?
यसको मूल अर्थ के हो?
सावधान हुनुहोस्! यसको उत्तरले तपाईको ज्योतिषालाई अप्रत्याशित तरिकामा खोल्छ – फरक यात्रामा तपाईं आरम्भ गर्नुभयो जब तपाईले आफ्नो कुण्डली पढ्ने इच्छा गर्नुभयो…
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गरेका थियौं, र कन्या कुंडलीदेखि कर्कटको लागि प्राचीन कुंडलीको जाँच गरिसकेका छौं, हामी सिंह, वा सिम्हाको साथ निष्कर्षमा पुगेका छौं।
ज्योतिषमा सिँह नक्षेत्र
तारा नक्षत्रको यो तस्वीर अवलोकन गर्नुहोस् जुन सिंह गठन गर्दछ। के तपाईं ताराहरूमा सिंह जस्तो देखिने कुनै चीज देख्न सक्नुहुन्छ?
सिंह तारा नक्षत्रको फोटो। के तपाईंले सिंह देख्न सक्नुहुन्छ?
यदि हामी सिंहका ताराहरूलाई रेखाहरूसँग जोड्दछौं भने पनि यो सिंहलाई ‘हेर्न’ गाह्रो हुन्छ।
सिंह नक्षेत्र ताराहरू सित रेखाहरू द्वारा जोडिए र नाम दिए
यहाँ राशिफलको एक राष्ट्रीय भौगोलिक तस्विर छ, उत्तरी गोलार्धमा सिंह देखाउँदै।
सिँहको साथ राष्ट्रिय भौगोलिक ताराको चार्ट जसमा सिंहलाई रातो घेरामा देखाइएको छ
यसबाट सिंहको साथ मानिसहरू कसरी पहिले आए? तर सिंह पछाडि फर्केर हेर्दा जहाँसम्म हामी मानव इतिहासमा थाहा छ त्यहाँ सम्म जान्छ ।
अन्य सबै राशी नक्षत्रहरु जस्तै, सिंहको छवि नक्षत्र भित्र देखि स्पष्ट छैन। बरु, सिंहको विचार पहिले आयो। पहिले ज्योतिषीहरूले ज्योतिष मार्फत तस्विरलाई चिन्हको रूपमा उदग्रीड गरे। प्राचीनहरूले आफ्ना बच्चाहरूमा सिंह नक्षत्र औंल्याउन र उनीहरूलाई सिंहसँग सम्बन्धित कथा भन्न सक्थे।
किन? पुर्वजहरुकालागि यसको के अर्थ थियो?
राशिफल नक्षत्रमा सिंह
हाँ सिँहका केही सामान्य ज्योतिष छविहरू छन्।
झम्टिन तयार सिँह
सिँह रातो घेरा भएको इजिप्टको डेन्डेरा मंदिरमा राशि निरीक्षण गर्नुहोस्।
सिँह मिस्रको प्राचीन डेन्डेरा राशिमा पुरानो कथामा
प्राचिन कथामा सिंह
हामीले देख्यौं कि बाइबलले बताउँछ कि सृष्टिकर्ताले नक्षत्रहरू बनाउनुभयो। उहाँले १२ तारामंडलहरू मार्फत आफ्नो कथा भन्न राशी चित्रहरूको ढाँचा तयार गर्नु भयो । पहिलो मानवहरूले उनीहरूलाई आफ्नो योजनाको बारेमा सिकाउन आफ्ना वंशहरूलाई सिकाए।
सिँहको कथा तय हुन्छ। यदि तपाईं आधुनिक कुंडली अर्थमा सिँह ‘होइन’ भने पनि, सिँहको पुरातन ज्योतिष कथा जान्न लायकको छ।
सिंहको प्राचिन अर्थ
सिँहको प्राचीन अर्थ पुरानो नियममा, याकूबले यहूदाको कुलको यो भविष्यवाणी गरे
९.यहूदा सिंहको डमरु हो। ए मेरो छोरो, शिकारबाट तँ आएको छस्, त्‍यो निहुरिन्‍छ, र सिंहझैँ लेटिरहन्‍छ, अँ, सिंहनीझैँ— कसले त्‍यसलाई उठाउने आँट गर्छ? १०.यहूदाको हातबाट राजदण्‍ड हट्‌नेछैन, राज्‍य चलाउनेको लाठी त्‍यसका खुट्टाका बीचबाट हट्‌नेछैन, जबसम्‍म त्‍यसका मालिक आउँदैनन्‌। र जातिहरू उहाँको आज्ञाकारी बन्‍नेछन्‌।
याकूबले घोषणा गरे कि एकजना शासक आउनुहुनेछ, एक ‘उसले’ सिंहको रूपमा चित्रण गरे। उहाँको शासनमा “जातिहरू” सम्मिलित हुनेछन् र उहाँ इस्राएलको यहूदाको कुलबाट आउनुहुनेछ । येशू, ख्रीष्टको रूपमा अभिषिक्त, यहूदा कुलबाट आउनुहुनेछ । तर उहाँले शासकको ‘राजदण्ड’ लिनुभएन । तर उहाँले उहाँको अर्को आगमनको लागि त्यसलाई सुरक्षित गर्नुभयो । जब उहाँ आउनुहुनेछ र सिंह जस्तै शासन गर्नुहुनेछ। यो नै सिँहले प्रारम्भिक कालदेखि चित्रण गरेको थियो।
सिँहको भविष्य देखाउँदै
यस आगमनलाई हेर्दै, लेखहरूले सिँहलाई पवित्र स्क्रोल खोल्ने भनेर वर्णन गर्दछन्।
१.सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको मुट्ठो मैले देखें, जो सात वटा मोहोर लगाएर बन्‍द गरिएको थियो। २.अनि एउटा बलवान्‌ स्‍वर्गदूतलाई ठूलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखें, “यो मुट्ठो खोल्‍न र यसका मोहोरहरू तोड्‌न योग्‍य को छ?” ३.स्‍वर्गमा अथवा पृथ्‍वीमा वा पृथ्‍वीमुनि यो चर्मपत्रको मुट्ठो खोल्‍न वा त्‍यसभित्र हेर्न सक्‍ने कोही थिएन। ४.कोही पनि त्‍यो चर्मपत्रको मुट्ठो खोल्‍ने अथवा त्‍यसभित्र हेर्ने योग्‍यको नपाइएको हुनाले म खूबै रोएँ।५. तब धर्म-गुरुहरूमध्‍ये एक जनाले मलाई भने, “नरोऊ! हेर, यहूदाका कुलको सिंह, दाऊदको मूल यो मुट्ठो र यी सात वटा मोहोरहरू खोल्‍न विजयी हुनुभएको छ।”
आफ्नो पहिलो आगमनमा सिंहले आफ्नो शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्‍यो र अब अन्त्यमा प्रवेश गर्ने छापहरू खोल्न सक्षम छ। हामी यो प्राचीन राशिफलमा सिँहलाई उसको शत्रु हाइड्रा सर्पको बारेमा हेर्न सक्छौं।
सिंहले प्राचीन डेन्डेरामा सर्पलाई कुल्चिदै
मध्यकालीन चित्रकारीमा हाइड्रा सर्पलाई सिंहले झम्टिदै
नक्षत्रहरूको रेखाचित्र । सिंहले सर्पको टाउको कब्जा गर्न गइरहेको
राशिको कथाको निष्कर्ष
सर्पसँग सिँहको सँघर्षको पछाडिको उद्देश्य उहाँको पराजय मात्र थिएन, तर शासन गर्नु थियो। यी शब्दहरूले सिँहको शासनलाई चित्रण गर्दछ।
१.तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्‍वी देखें, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्‍वी बितिगएका थिए। समुद्र त अब छँदैथिएन। २.अनि मैले परमेश्‍वरबाट दुलहाको निम्‍ति दुलही जस्‍तै गरी सिङ्गारिएर तयार पारिराखेकी, अर्थात्‌ पवित्र सहर, नयाँ यरूशलेम स्‍वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखें। ३.सिंहासनबाट यसो भन्‍ने एउटा चर्को सोर मैले सुनें, “हेर, परमेश्‍वरको वास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ, र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन्, र परमेश्‍वर आफै तिनीहरूका परमेश्‍वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। ४.उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ, र फेरि मृत्‍यु नै हुनेछैन, र शोक र पीडा पनि हुनेछैन। किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्‌।” ५. सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्‍नुभयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्‍याउँछु।” उहाँले यसो पनि भन्‍नुभयो, “यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्‍य छन्‌।” ६. उहाँले मलाई भन्‍नुभयो, “अब सिद्धियो। म अल्‍फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्‍त्‍य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म सित्तैँमा दिनेछु।७. जसले विजय प्राप्‍त गर्छ त्‍यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ, र म त्‍यसका परमेश्‍वर हुनेछु, र त्‍योचाहिँ मेरो छोरो हुनेछ।
प्रकाश २१: १-७
२२.मैले त्‍यस सहरमा कुनै मन्‍दिर देखिनँ, किनकि त्‍यहाँको मन्‍दिर स्‍वयम्‌ परमेश्‍वर सर्वशक्तिमान्‌ र थुमा नै हुनुहुन्‍छ। २३.त्‍यो सहर उज्‍यालो गराउन सूर्य र चन्‍द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्‍वरको महिमा नै त्‍यसको उज्‍यालो हो। त्‍यहाँको बत्तीचाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्‍छ।२४. त्‍यहाँकै उज्‍यालोमा जाति-जातिहरू हिँड्‌डुल गर्नेछन्‌। पृथ्‍वीका राजाहरूले आफ्‍ना वैभव त्‍यसमा ल्‍याउनेछन्‌।२५. दिनमा त्‍यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्‍द हुनेछैनन्, र त्‍यहाँ रात नै हुनेछैन।२६. तिनीहरूले जाति-जातिहरूका वैभव र सम्‍मान त्‍यसभित्र ल्‍याउनेछन्‌। २७.तर थुमाका जीवनको पुस्‍तकमा नाउँ लेखिएकाहरूबाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झूट बोल्‍ने कुनै किसिमले पनि त्‍यसभित्र पस्‍नेछैन।
प्रकाश २१: २२-२७
राशि चिन्हहरू पूरा भएको
यस दर्शनमा, हामी पुरातन राशिफल कथाको पूरा भएको र हुन आएको देख्दछौं। हामी दुलही र उनको पतिलाई देख्छौं; परमेश्वर र उहाँका छोराछोरीहरू – मिथुन राशिमा दुई पक्षीय तस्वीरको छवि। हामी पानीको नदी देख्छौं – कुम्भमा प्रतिज्ञा गरिएका। मृत्युको पुरानो व्यवस्था – मीनको वरपर फिताहरूले चित्रण गरेको – अब छैन। त्यहाँ भेडाको पाठो छ- मेषमा चित्रण गरेको छ र पुनरुत्थान भएका मानिसहरू – कर्कटले चित्रित गरेको छ – उहाँसँगै बस्नुहुन्छ। तुला राशिको तराजू अब सन्तुलित छ किनकि “कुनै पनि अशुद्ध कुराले कहिल्यै प्रवेश गर्दैन”। हामी त्यहाँ सबै जातजातिका राजाहरूलाई पनि देख्छौं, राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु, ख्रीष्टको अधीनमा शासन गर्दैछ – जसको सुरुवात कन्याको सन्तानको रूपमा थियो, र अन्तमा सिंहको रूपमा प्रकट भयो।
राशि कथामा उद्धार आवश्यक
तर किन सिंहले शुरुमा शैतानको सर्पलाई मात्र नष्ट गरेन? किन सबै राशि अध्यायहरू मार्फत जाने? जब येशू आफ्नो शत्रु वृश्चिकको सामना गर्नु भयो तब उहाँले त्यो समयको चित्रण गर्नु भयो ?
अब यस संसारको न्‍याय हुन्‍छ। यस संसारको शासक बाहिर फालिनेछ।
यस संसारको राजकुमार शैतानले हामीलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो। जब एक शक्तिशाली सैन्य बलको सामना गर्नुपर्दछ आतंककारीहरूले प्राय: नागरिकको पछाडि लुक्छन्। यसले पुलिसको लागि दुविधा पैदा गर्दछ कि उनीहरूले आतंककारीहरूलाई बाहिर निकालेर नागरिकहरूलाई मार्न सक्छन्। जब शैतानले आदमलाई लोभ्याउन सफल भयो उसले आफ्नो लागि मानव ढाल बनायो। शैतानलाई थाँहा थियो कि सृष्टिकर्ता पूर्ण धर्मी हुनुहुन्छ र यदि उहाँले पापलाई दण्ड दिनुहुन्छ भने, उहाँको न्यायमा धर्मी हुन, उहाँले सबै पापको न्याय गर्नुपर्दछ। यदि परमेश्वरले शैतानलाई नष्ट गर्नुभयो भने शैतान (जसको अर्थ दोषलागाउने वाला) हामीलाई हाम्रो आफ्नै गल्तीको दोष लगाउन सक्छ र हामी उ सँगै नष्ट हुनु आवश्यक छ। यसलाई अर्को तरिकामा हेर्नको लागि, हाम्रो अनाज्ञाकारिताले हामीलाई विधिसम्मत शैतानको नियन्त्रणमा ल्यायो। यदि परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुभयो भने उहाँले हामीलाई पनि नष्ट गर्नुपर्नेछ किनभने शैतानले हामीलाई उहाँको ईश्वरीय नियमको अवज्ञा गरेकोमा समातेको थियो ।
त्यसैले हामीलाई शैतानको मागबाट छुटाउनु आवश्यक थियो किनकि उसलाई हुने सजाय हामीमाथि पनि आउन सक्थ्यो । हामीलाई पापबाट छुटाउन उद्धारक चाहिएको थियो। सुसमाचारको पुस्तकले यो यसरी वर्णन गर्दछ:
१.तिमीहरू आफ्‍ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। २.यिनैमा यस संसारको रीतिअनुसार र आकाशको शक्तिको मालिकअनुसार, अनाज्ञाकारिताका सन्‍तानमा अहिले काम गर्ने आत्‍माअनुसार तिमीहरू अघि एक पल्‍ट चल्‍दैथियौ।३. तिनीमध्‍ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्‍छा पूरा गरेर आफ्‍नो पापमय स्‍वभावका लालसामा अघि जिउँथ्‍यौं, र बाँकी मानिसजस्‍तै हामी स्‍वभावैले क्रोधका सन्‍तान थियौं।
एफिसी २: १-३
क्रुसमा उद्दार प्राप्त गरियो
मकरमा चित्रित आफ्नो बलिदानमा येशूले त्यो क्रोध आफैंमा लिनुभयो। हामी मुक्त हुन सकौं भनेर उहाँले उद्दारको मूल्य चुकाउनु भयो
४.तर परमेश्‍वर, जो कृपामा धनी हुनुहुन्‍छ, उहाँले आफ्‍नो महान्‌ प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, ५.यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्‍टसँगै जीवित पार्नुभयो— अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। ६.र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो, अनि स्‍वर्गीय स्‍थानहरूमा ख्रीष्‍ट येशूसँग बसाल्‍नुभयो। ७.योचाहिँ ख्रीष्‍ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दयामा आफ्‍नो अनुग्रहको असीम सम्‍पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो।८. किनभने अनुग्रहबाट विश्‍वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ— र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्‍वरको वरदान हो— ९.कर्महरूद्वारा होइन, नत्रता मानिसले घमण्‍ड गर्नेछ।
परमेश्वर मानिसहरूका लागि न्यायको अभिप्राय राख्नुभएन। उहाँले उहाँका विरोधी (शैतानको अर्थ “विरोधी”)शैतानको लागि तयार गर्नुभएको थियो। तर यदि उहाँले शैतानलाई उसको विद्रोहको लागि नष्ट गर्नुभयो भने उहाँले अरूलाई पनि उही व्यवहार गर्न पर्छ।
“त्‍यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्‍नेछन्, ‘श्रापित मानिस हो! मबाट दूर होओ, र दियाबलस र त्‍यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्‍तको आगोमा जाओ।
यसै कारणले येशूले क्रूसमा ठूलो विजय हासिल गर्नुभयो। त्यसले उहाँले हामीलाई शैतानले लगाएको वैधानिक अधिकारबाट मुक्त गर्नुभयो। उहाँले अब हामीलाई चोट नपुर्याइकन शैतानलाई प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ । तर हामीले शैतानको शासनबाट उम्कने बाटो रोज्नु पर्छ। सिंहले हाल सर्पलाई प्रहार गर्नबाट पछाडि रहेको छ ताकि मानिसहरू त्यस न्यायबाट उम्किन सक्नेछन्।
आफ्‍नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्‍छ भन्‍ने कसै-कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्‍न, तर कोही पनि नष्‍ट नहोस्, तर सबै जनाले पश्‍चात्ताप गरून्‌ भन्‍ने इच्‍छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान्‌ हुनुहुन्‍छ।
२ पत्रुस ३:९
यसैकारण हामी आज पनि शैतानको बिरूद्ध अन्तिम प्रहारको पर्खाइमा छौ, जुन धनुमा चित्रण गरिएको छ र वृषमा चित्रित अन्तिम न्यायको लागि अझै पर्खिरहेका छौं। तर लेखहरूले हामीलाई चेतावनी दिन्छन्।
२ पत्रुस ३:१०
तर प्रभुको दिन त चोरजस्‍तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाशचाहिँ ठूलो आवाजसाथ बितिजानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्‍लिनेछन्, र पृथ्‍वी र त्‍यसमा भएका सबै थोक भस्‍म हुनेछन्‌।
राशिफल ग्रीक “होरो” (घण्टा) बाट आएको हो र यसको मतलब विशेष घण्टा वा समयलाई अंकित (स्कोपस) गर्नु हो। लेखहरूले सिंह समय (होरो) लाई निम्न तरिकाले चिह्नित गर्दछ।
यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्‍तो छ, सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निद्राबाट ब्‍यूँझने ठीक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्‍वास गरेको भन्‍दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ।
यसले घोषण गर्छ कि हामी जलिरहेको भवनमा सुतिरहेको मानिसहरू जस्तै छौं । हामी यो घडी (होरो) मा उठ्नु आवश्यक छ!
किनभने जब गर्जने सिंह आउँछ उसले त्यो प्राचीन सर्प र उसको वैधानिक शासनमा रहेका सबैलाई नाश गर्नेछ। विनाशले हाम्रो अनुहारमा हेरिरहेको छ ।
तपाईंको सिंग पठन
तपाईं यस तरीकाले सिंह राशिफल पढ्न लागू गर्न सक्नुहुन्छ
सिंहले तपाईंलाई भन्छ कि हो, त्यहाँ गिल्ला गर्नेहरू छन् जसले तिरस्कार र तिनीहरूको आफ्नै खराब इच्छालाई अनुसरण गर्छन। तिनीहरू भन्छन् कि उसले प्रतिज्ञा गरे अनुसार “यो कहाँ आउँदैछ” ? जब देखि हाम्रा पुर्खाहरू मरे, सृष्टिको शुरूदेखि नै सबैकुरा यस प्रकारको छ। ” तर तिनीहरू जानाजानी बिर्सन्छन् कि परमेश्वरले यस संसारमा भएका सबै कुराको न्याय गर्नुहुनेछ र नष्ट गर्नुहुनेछ।
सबै कुरा यस प्रकारले नष्ट हुने भएकाले, तपाईं कस्तो किसिमको मानिस हुनुपर्छ?
तपाईंले पवित्र र ईश्वरीय जीवन बिताउनुपर्दछ जब तपाईं परमेश्वरको आगमनको दिन र यसको गतिलाई प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ । त्यो दिन आगोले स्वर्गको विनाश ल्याउनेछ, र सबै तत्त्वहरू तातोले पग्लनेछ। तर उहाँको प्रतिज्ञालाई पालन गर्दै तपाईंले नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको आशा गर्नु आवश्यक छ, जहाँ धार्मिकता बास गर्दछ। त्यसोभए तपाईं यस कुराको चाहना राख्नुहुन्छ भने ,तपाईंका हरेक प्रयास निश्कलंक, दोषरहित बनाउनुहोस् र उहाँसँग शान्तिमा रहनुहोस्। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि हाम्रो प्रभुको धैर्यताको अर्थ तपाईंको र तपाईंको वरपरकाका लागि उद्धार हो। तपाईं पहिल्यै पूर्वसचेत भइसकेको हुनाले, तपाईं सुरक्षित रहनुहोस् ताकि तपाईं अवैधानिक गल्तीबाट उत्तेजित नहुनुहोस् र तपाईंको सुरक्षित स्थानबाट नखस्नुहोस् ।
यहाँ प्राचीन ज्योतिषा ज्योतिषशास्त्रको आधार सिक्नुहोस्। कन्यामा यसको सुरुवातबाट पढ्नुहोस्।
तर सिंहको लिखित कथाको गहिराइमा जान:
समझ र जीवन को उपहार प्राप्त गर्नु
मोक्ष प्राप्त गर्दै, कर्माबाट स्वतन्त्रता
मोक्ष प्राप्त गर्न अब्राहमको साधारण तरिका
आउँदै गरेको महान् राजाको पहिलेनै नामांकरण गरिएको
आउनुहुने ख्रीष्ट – ‘सात’ को चक्रमा
लेखक Ragnarप्रकाशित 06/06/2021 06/06/2021 श्रेणिया ज्योतिषा (Jyotish)टैग्स दैनिक राशिफल, लियो नक्षत्र, लियो महिना, लियो राशिफल, सिंह कुंडली, सिंह कुण्डली, सिंह राशि, सिंह सिंह जब लिओ हुन्छ
संस्कृत र हिब्रू वेदका मिलन: किन ?